သိပ်မကြာခင်ပျောက်ဆုံးမျိုးဆက် ဖြစ်သွားမှာပဲ လို့ ဆိုလာတဲ့ ဦးမြအေး – Nyang Media
စက်တင်ဘာ 18, 2019
88 ပြန်/ကြား / ကိုဌေးးကြွယ်၊ကိုမြအေး၊ကိုမင်းကိုနိုင် (၂၀. ၅. ၂၀၀၇)
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ပျောက်ဆုံးမျိုးဆက် ဖြစ်သွားနိုင်သလား ယဉ်ကျေးစွာ မှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံ (၃၁)နှစ်အလွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ရဲ့ နိုင်ငံရေးထုထည်၊နိုင်ငံရေး အင်အား ဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိနေသလဲ။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမြအေးနဲ့ ငြမ်းမီဒီယာက တွေ့ဆုံမေးမြန်ထားပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် (၃၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးထုထည်၊နိုင်ငံရေး Space က သိပ်ကို ကြီးခဲ့တာ (၃၁)နှစ်အလွန်မှာ လက်ရှိရှိနေတဲ့ ထုထည်နဲ့ Space ကိုဘယ်လိုများ ပြောချင်လဲ ကိုမြအေး။
UMA – ကျွန်တော်က ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်မှာဆို ဒုတိယတန်းက လူပါ။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် မျိုးဆက်မှာ ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်က တောက်လျောက်ပါဝင် ဖြတ်သန်းလာသူတွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် Generation ကို ကျွန်တော်က အရမ်း ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ အရမ်းအားထားတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ထက်ထိ ဒီယုံကြည်ချက်ကိုမလျှော့သေးဘူး။ လက်မလွှတ် သေးဘူး။ အဲဒီယုံကြည်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မျိုးဆက်က ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ပဲ ဖြစ်တယ်။ Strongly ယုံကြည်တာနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်သိနေတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ပြောတယ်။ Democratic Norms တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။ အခု ဒီမိုကရေစီပြောလိုက်၊နေရှင်နယ်လစ်ပြောလိုက် အဲဒါတော့မရဘူး။ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ …
တူတာတွေလည်း ရှိတယ်။ မတူတာတွေလည်း ရှိတယ်။ တည့်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ မတည့်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရည်အချင်းရှိတယ်။ အကယ်ဒမစ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်နော်။ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝနဲ့၊ အကယ်ဒမစ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝက မတူပါဘူး။နောက်တစ်ခုက သတ္တိရှိတယ်။ အချင်းချင်း ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ် ရှိကြ တယ်။ စကားများတယ်။ကျွန်တော်တို့ ရန်ဖြစ်တယ်။ အချင်ချင်းသွားထိရင်စုသွားတာ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှုမှာလည်း စဉ်းစားဉာဏ်ပြည်စုံတဲ့ သူတွေအများကြီးပဲ။ နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း တွေလည်း ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော် ဒါကို အရမ်းမျှော်လင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်ကလောက် ယုံကြည်မှုက အားမကောင်း တော့ဘူး။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် Generation က ထုနဲ့ထည်နဲ့ အားကောင်းခဲ့တာ အရမ်းကောင်းခဲ့တာ။ အခုကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ပါ အားမနာတမ်းဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် …
ငြမ်းမီဒီယာ – ကိုမြအေး အားမကောင်းဘူးပြောတာလား။ သူတို့တစ်တွေအားမကောင်းဘူးပြောတာလား။
UMA – ကျွန်တော်အားမကောင်းတော့တာ ပြောတာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုက အရင်လောက်အားမကောင်းတော့ဘူး လျော့လာတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဘာကြောင့် အားလျော့လာတာလဲ ကိုမြအေး။
UMA – အခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးတွေမှာ ဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ထောင်စကားပြောရင် အထာတွေရှိကြတာပေါ့ဗျာ။ အထာ ထားရမယ့်ကိစ္စတွေမှာလည်း လျော့လာတယ်။ နင်းတက်တို့၊ ဖြတ်တက်တို့၊ ကျော်တက်တို့ ဆိုတာ နိုင်ငံရေးမှာရှိတယ်။ အဲလိုပုံစံတွေ ဆန်လာသလားလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲ အခြေအမြစ် မရှိတာတွေနဲ့ ပုံဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလာတာ ကျွန်တော် သွားတွေ့တယ်။ 88 Generation ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီလားပေါ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါတယ်နော်၊ တစ်ခါတစ်လေအဲလိုစဉ်းစားမိတယ်။အဲဒီတော့ အပြင်လူပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပါနေတဲ့ ဟာကို ပြောနေတာ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် Generation က ထုနဲ့ထည်နဲ့ အားကောင်းခဲ့တာ အရမ်းကောင်းခဲ့တာ။ အခု ကတော့ ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ပါ အားမနာတမ်းဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးမှာ အလယ်လပ် သလို ဖြစ်နေပြီ။
လွဲမှားတဲ့ မာနတွေ၊လွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ အလွဲအမှားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ကြတာပါပဲလေ။ လူကမှားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် …
ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် သိပ်မကြာခင်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲ။ အဲဒါတော့ နည်းနည်း စိတ်ပူတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့မရဘူးလေဗျာ။ကိုယ်လည်း အမှားတွေရှိမှာပဲ။တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအမှန် မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ပြန်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့်ပေါ့၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် Generation ကို ဦးဆောင်သူတွေရော၊ ဟိုးအရင်က သူတွေရော အချင်းချင်း ကြားမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင် 88 Generation ရဲ့တိုင်းပြည်ဘာလုပ်သင့်သလဲ၊ ဘယ်သွားသင့်ပြီလဲဆိုတာကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အကုန်ရှိတဲ့ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုလောက် ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။ ကြာပြီဗျာ ဒီဟာ က။ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ထက်ထိဖြစ်မလာဘူး။ လုပ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Financial Problem တွေရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဝေဖန်မှုတွေကလည်း ပြင်းထန်လာကြတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဟုတ်တာရော၊ မဟုတ်တာတွေရော ဘာတွေမှန်းကိုမသိတော့တာလေဗျာ။ ဒီ Generation ကြီးက ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ပြီးသွားပြီ။ တချို့ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တွေဆို မင်းမစဉ်းစားပါနဲ့ကွာ ပြီးသွားပါပြီဆိုတာတွေတောင် ရှိလာတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒါဆို ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်က ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီး နိုင်ငံရေးစိတ်ကုန် သွားတာလား။
UMA – အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။အဲလို မဆိုလိုပါဘူး ။ခြေကုန်လက်ပန်းလည်း မကျဘူး။နိုင်ငံရေးလည်း စိတ်မကုန်ဘူး။ လုပ်တော့ လုပ်နေတာပဲ။တကွဲတပြားနဲ့ လုပ်နေမှုတွေအကုန်လုံးက ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ရဲ့ သဘာဝကိုယ်တိုင်က တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ချွန်ပြီး လုပ်လို့ ရတဲ့ကိစ္စ ကျွန်တော်တော့ မတွေ့ဖူးဘူး။ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆိုတာမရှိဘူး။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်က စုလိုက်မှ အားဖြစ် တာ။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါပါတယ်၊ လွဲမှားတဲ့ မာနတွေ၊လွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ အလွဲအမှား တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ကြတာပါပဲလေ။ လူကမှားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အကုန်လုံး ပြန်သုံးသပ်ဖို့ လိုနေပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ စုပြီးတော့ ဒီနေ့အချိန်မှာ ကျနော်တောင့်တတဲ့ဟာ ဥပမာအားဖြင့်တပ်နဲ့ NLD ကြား၊ တိုင်းရင်းသားနဲ့ NLD ကြား၊ တိုင်းရင်းသားနဲ့ တပ်ကြား လွန်းထိုးပေးနိုင်တဲ့ အင်အားစုကြီး ရှိပါလျက်နဲ့ လုပ်လို့မရတာ။အဲဒါ 88 Generation ပဲ။ Political Influence အရမ်းကြီးတယ်။နောက်တော့ တကယ်တတ်တဲ့လူတွေ။ 88 လို့ ကျွန်တော်ပြောပေမယ့် ၉၆ – ၉၈ ပါ ပါတယ်နော်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကွန်ဖရင့် တစ်ခုကိုလိုချင်တာပဲ။ ဒါ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါက …
သူတို့က တကယ့် အကယ်ဒမစ်တွေ ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးသာတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် YSPS၊ တကောင်း၊ လောကအလင်း အများကြီးဗျာ။အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာက ကျွန်တော်လိုချင်တာ၊ ကျွန်တော် ဆန္ဒရှိတာ အကုန်လုံးက လုပ်တော့ လုပ်နေကြတာပဲ ကျွန်တော်လည်း ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစု လုပ်နေတာပဲ။ကျန်တဲ့သူတွေလည်း လုပ်နေကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လုပ်ရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ ဘာလုပ်နေမှန်း မသိဘူးဖြစ်လာတယ်။ Impact က နည်းတာ။ ဖြစ်စေချင်တာ ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးဆိုတာကလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဗျာ။အများစုပေါ့။ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတွေနဲ့ ကျွန်တော် တော်တော်စိုးရိမ်တာပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေကို။ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ မှန်မှန်ကန်ကန်မျှမျှတတ ဒါကတော့ ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ်။ အစိုးရ ကတော့ ဒီနေရာမှာ ဒါလုပ်ရမယ် ထင်တယ်။ တပ်ကိုပြောရမယ့် အကုန်ကျွန်တော်တို့ အပြတ် ပြောရမှာပဲ။ ပြောတယ်ဆိုတာကတော့ မူတော့ရှိရမယ်လေ။ဒါပေမယ့်တပ်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်တော့ ဆက်မသုံးနဲ့ ဒါတော့ လက်မခံဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ နိုင်ငံရေးမှာ Principles တွေရှိတယ်။ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ထိုင်လို့မှ မရတာ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုထွက်မလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးမယ်၊ညှိမယ်လေ။ ဥပမာ ဆိုပါစို့ဗျာ၊ ဆဲဗင်းဇူလိုင်လို ကိစ္စမျိုး မင်းသွေးသစ်တို့ကို (၁၅)ရက် ထောင်ချတယ်။ ဒါအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိဘူး ကျွန်တော်တို့ ပြောရမယ်။ ရခိုင်မှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေနေတယ်၊ အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့ ပြောရမယ်လေ။အဲဒါပြောဖို့ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ဘယ်လိုသွားသင့်သလဲဆိုတာ Brain Storming လုပ်ရမှာ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကွန်ဖရင့် တစ်ခုကိုလိုချင်တာပဲ။ ဒါ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါက ငွေကြေး၊ ဦးနှောက်၊စီစဉ်မှုအပိုင်းတွေ လိုတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုမိုးသီးတို့၊ ကျန်တဲ့လူတွေရော ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ မင်းဘာကောင်လဲ၊ ငါဘာကောင်လဲ ဆိုတာထက် မင်းတို့ငါတို့တိုင်ပင်ပြီး ဘယ်လိုပြောသင့်ပြီ ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို သွားချင်တာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်း မှတ်မိနေတာရှိတယ်။ ပြန်စုစည်းဖို့ဆိုတာ ကိုမြအေး ပြောသလို ပုံစံလို့ ကျွန်တော်တော့ ယူဆတယ်။ ကိုမြအေးပြောတာမှာ ကျွန်တော်ကောက်မိတာက ဒီအင်အားစုကလည်း တစ်ယောက် တစ်နေရာ ပြန့်ကျဲနေတာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ မာနတွေ။ပွင်ပွင့်လင်းလင်ပြောရရင် ဒီလိုပြောတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကိုမြအေး။ ပြောရင်တော့ ညီညွှတ်တယ်။တကယ်တမ်းလုပ်တဲ့အခါ ကွဲထွက်သွားကြတယ်။ ဘာလို့စုစုစည်းစည်း မလုပ်နိုင် ကြတာလဲ။
UMA – အားမနာတမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ထောင်ကလွတ်ခါစမှာ အဲဒီတုန်းက ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက် ကျောင်းသား များပေါ့။ နောက်တော့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ သူတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း အသိအမှတ်ပြုပေမယ့် အသိအမှတ်ပြုမှုက အားနည်းခဲ့တယ်ဗျ။ ဒါက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာဝန်ခံတာ။ ကျွန်တော့် တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဝန်ခံချက်ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုဆက်ဆံရေး ချို့ယွင်းမှုတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ချက်ခြင်း လက်ငင်းကြီး ပလက်ဖောင်း တည်ဆောက်လို့ တော့မရဘူးဗျ။ တချို့တချို့လည်းပလက်ဖောင်း ချက်ခြင်း လိုချင်တဲ့ပြဿနာ ရှိကြတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ အပြစ်မတင် ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက် ပါပဲ။သူတို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ မတည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မစွမ်းနိုင်ဘူး။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ အမှားပဲ။ ပိုဆိုးတဲ့ကိစ္စက NLD အစိုးရ …
ကျွန်တော် တို့ တာဝန်မကျေဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူမှာရှိတယ် ပြည်ပရောက် ကျောင်းသားအပါအဝင် ရဲဘော်များ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်တွေ အကုန်လုံး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာနိုင်ရေး ဆိုတာကို တော်ဝင်စင်တာမှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခုကဗျာ၊ အလုပ်တွေနဲ့ ဝရုန်းသုန်းကား လုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ သေသေချာချာဂရုမစိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အားနည်းချက်။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ရဲ့ သဘာဝက ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာစကားတွေ ဘာတွေများပေမယ့် ပြဿနာ မရှိဘူး။ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ ပြဿနာ မရှိဘူး။ အခုလည်း အရေးအကြောင်းဆို တိုင်ပင်နေဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ကိုမိုးသီးဇွန် ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မစွမ်းနိုင်ဘူး။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ အမှားပဲ။ ပိုဆိုးတဲ့ကိစ္စက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကို ကျွန်တော်တို့ မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူး။ ကျန်တဲ့ အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဘယ်လိုလုပ် သွားလုပ်မှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကိုင်နိုင်မှု စွမ်းရည်က ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ ပြန် သံသယ ဖြစ်မလာဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ။ဒါကိုတော့ နစ်နစ်နာနာ သုံးသပ်ရမယ်လေ။ အဲဒီ အခါကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထင်မြင် လွဲမှားမှုတွေ ဖြစ်လာ တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ပြဿနာ ဘာလဲဆိုတော့ နှစ် သုံးဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးပေါင်း လုပ်တဲ့အတွက် စာတမ်း တစ်စောင်ထွက်လာတဲ့အထိ ကြိုးစားတယ်။ အမှန်တော့ နှစ်သုံးဆယ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လယ်ဗယ်တွေ ဆွေးနွေးစေချင်တာ။ ကျွန်တော့် တစ်ယောက်တည်း အယူ အဆ။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ် ဒါပေမယ့် အဲဒါ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို Driving လုပ်ပေးတဲ့ အနေ အထား ပဲဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၃၁)နှစ်မှာ ကျတော့ အခြေအနေအရ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကြားထဲမှာ တော်တော် လွဲမှားတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ ဒီပုံစံကြီးကတော့ မရဘူးလို့မြင်တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် တိုင်းပြည် မျက်နှာပဲကြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနဲ့တူအောင် ပေါ်လစီပိုင်းဆိုင်ရာကို ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – စုစည်းလို့ရမယ်ထင်လား။မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာလေ။
UMA – စုစည်းတယ်ဆိုတာ ဒီလို ရှိတယ်ဗျ စုစည်းတယ် ဆိုတာကို တစ်ဖွဲ့တည်း လုပ်တာကို မြင်ကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ In Line ဖြစ်ဖို့လို့ မြင်တယ်။ အဲဒါကိုအတွေ့အကြုံအရပြောတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရပြောတာ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ဒီကမ်ပိန်းတွေက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တာဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇေယျ ၊ကိုပြုံးချိုမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်၊ ကိုဂျင်မီ၊ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် တို့လုပ်တာပါ။ လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီအတိုင်း မလုပ်ခဲ့ ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဟန်က။ငါတို့ထိုင်မယ်၊ ငါတို့ဆွေးနွေးမယ် ကျွန်တော်တို့ အဲလို မလုပ်ဘူး။ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ အဲလို မလုပ်ဘူး။အဲဒီအချိန်က အရမ်းကြပ်တဲ့ အချိန် ဒီလိုမျိုး ဖုန်း၊Video Call တွေ ဘာတွေရှိမှ မရှိတာ။ ကီးပတ်ဖုန်းသာ ရှိတဲ့ အချိန်။ကျွန်တော်တို့ အပြင်က လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး အကြံဉာဏ်ယူပြီးမှလုပ်တာ ကျွန်တော်တို့မှာ ကွဲပြား သွားတာ မရှိဘူး။
လွဲတယ်။ ကွဲပြီး လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ခွဲပြီးလုပ်တာ။ ကွဲသွားပြီး လုပ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မသုံးဘူး။ အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆို အမြဲတမ်း တိုင်ပင်ကြတယ်။ဆွေးနွေးကြတယ်။အရင်လိုတော့ …
မင်းတို့လုပ် ငါတို့ ဝန်းရံမယ်။တောက်လျောက်ပဲ။ ကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်။ လက်ခံစရာတွေလည်း ပါတယ်။ လက်မခံ စရာ တွေလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီကမ်ပိန်းတွေအောင်မြင်ပြီး ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအဆင့်ထိ တက်သွားတာ။ ဒါတွေ ကျနော်တော်ရုံတန်ရုံ ထုတ်မပြောပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ငွေရတု ကြေညာစာတမ်းမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလို အချက်အပါအဝင် အခြားအချက် တွေပါတယ်။ ကျွန်တော်အသေး စိတ် မမှတ်မိဘူး။အဲဒီအချက်တွေကို ပြန်ကောက်ကြည့်ရင် အဲဒါတွေကို အခုထိဖော်ဆောင်နိုင် ခြင်းမရှိသေးဘူး။အဲဒါတွေကို ဘယ်တော့ဖော်ဆောင်မှာလဲ။ဘယ်လိုဖော်ဆောင်မှာလဲ။ ဒီအခြေအနေနဲ့ ရော ဖော်ဆောင် နိုင်ပါ့ မလား။
UMA – အဲဒီမှာ သုံးချက်ရှိတယ်။ နံပါတ်တစ်က ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ နံပါတ် နှစ်ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး (သို့မဟုတ်) အသစ်ပြန်ရေးဆွဲရေး၊ နံပါတ်သုံးကတော့ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ် ရေး ငြိမ်ချမ်းရေး ညီလာခံကြီး တစ်ရပ်ကျင်းပရေး ။ဒီဖရိမ် သုံးခုကနေမြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး က အခုထက်ထိ မလွတ်ဘူး။ အခုထက်ထိ ဒီသုံးခု အတွင်းမှာပဲ ရှိတယ်။ ပြန်ကြည့်။အဲဒီကာလမှာ အဲဒီဟာကြီးကို လုပ်ဖို့ ဆိုတာက ဒါက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်း ချက် ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါကို Implementation လုပ်ဖို့ဆိုတာက လုပ်ဟန်ပိုင်းမှာ က ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သွားမလဲ ဆိုတာ။ပြန်ကောက်ရရင် ကျနော်တို့ရဲ့ Road Map ကို ပြန်စဉ်းစားရမယ်။ အခုအခြေအနေတိုင်းဆိုရင် နိုင်ငံရေးမှာ ဝေဖန်သူ၊သုံးသပ်သူ၊အကြံပြုသူပြီးရင် ကျနော်တို့ 88 Generation က ပွဲကြည့် ပရိသတ်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က Play Maker တွေ မဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီသုံးခုကိုဖော်ရမှာ Play Maker Roll ကလူတွေပဲ။ ပလေယာတွေက ဖော်ရမှာလေ။ပလေယာတွေ ဖော်အောင် ကျွန်တော်တို့ တွန်းအားပေးတဲ့ အခြေအနေမှာပဲရှိတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာ Power To Power စကားပြောတာလေ။ ပါဝါမဟုတ်ဘူးဆို စကားပြောမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အကြံဉာဏ်တော့ ယူရင်ယူလိမ့်မယ်။ ဒီလောက်ပဲ။ အခု 88 လယ်ဗယ်က အဲဒီအဆင့်ပဲရှိ သေး တယ်။ ဝေဖန်မယ်၊ သုံးသပ်မယ်၊ပြောမယ်။ ဒါပဲရှိသေးတယ်။Driving ကနေ မတက်ဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – အဲဒီတော့ 88 က မတက်တာလား၊ ကျသွားတာလား ကိုမြအေး။
UMA – ကျသွားတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ပေါ့ တချို့လည်းစိတ်ဆိုးကြလိမ့်မယ် ထင်တယ် မတတ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော် က ချစ်လို့ပြောတာ။ ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ ပဲ။ 88 ကို ကျွန်တော်အရမ်းမျှော်လင့်တာ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက် တွေက အခုချိန်မှာ နည်းနည်းတော့အားလျော့သွားပြီ။ ဒီပုံစံအတိုင်းသွားရင် ပျောက်ဆုံးမျိုးဆက်ပဲဖြစ်မှာပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထတွေ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေ အများကြီးပါ။ အသိအမှတ်လည်း ပြုပါတယ်။ ကိုမြအေးတို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ချစ်ခင်မှုတွေ ရှိတာလည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနောက်ပိုင်း မှာ ရှစ်ဆယ့် ရှစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး အဟ က များနေသလိုပဲ။ လုပ်တာတော့ လုပ်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွဲနေ တယ်။ ကွဲပြီးတော့ လုပ်နေတာက ထိရောက်ပါ့မလား။
UMA – အဲဒါနည်းနည်း လွဲတယ်။ ကွဲပြီး လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ခွဲပြီးလုပ်တာ။ ကွဲသွားပြီး လုပ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မသုံးဘူး။ အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆို အမြဲတမ်း တိုင်ပင်ကြတယ်။ဆွေးနွေးကြတယ်။ အရင်လိုတော့ အမြဲတမ်းတိုင်ပင် ကြတာတော့ မဟုတ်ဘူး ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရှစ်လေးလုံးကိစ္စရပ်တွေဆို ကျွန်တော်တို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေ ၊နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ရှိကြတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ကွဲထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် အပေါ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားကြတာ။ ဒါအရပ်သား အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်တာပါ။ အရင်ခေတ်က မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘက် ခေတ်မှာပါ။ ဥပမာဗျာနိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်မယ်ဆိုရင် (ဦး)ကိုကိုကြီး တို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်တဲ့ အစကတည်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပါခဲ့တာပဲ။ ဦးဆုံးသန္ဓေတည်တဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ပါခဲ့တာပဲ။ဒါပေမယ့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီထဲ ဆက်မလို က်သွားတာလေ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဆိုတာက Political Ideology နဲ့ဆိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုရဲ့ ဝိညဉ်က လည်း အဲဒါပဲ။အဲဒါက ပေါ်လစီ အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ Ideology ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ ဒီအပိုင်းတွေကိုကျတော့ ကျနော်တို့က အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ မရဘူး။ဒါပေမယ့် ပြည်သူ့ပါတီနဲ့ ကျနော်ကွဲမှမကွဲတာ။ အခု ပြည်သူ့ပါတီ သွားပြီတော့ စကားပြောနေတာပဲ။ သူတို့ အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဆိုသွားတာပဲ။ ကျနော့်အရေးရယ် အကြောင်းရယ်ဆို သူတို့လာတာပဲ။ ငြိမ်းပွင့်ကလူတွေလည်း ဒီအတိုင်း ပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ကွဲပြီးထွက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ခွဲပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကိုမြအေးလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေက နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတာ အဲဒီတော့ ခွဲပြီးလုပ်နေတာ တွေကို ဘယ်လိုစုစည်းကြမလဲ။
UMA – ခင်ဗျား အခုပြောနေတာ 88 မှာ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊မြအေးလောက်ပြောနေတာလေ။ ကျွန်တော်အစ ကတည်းပြောသလို ကျွန်တော်က ဒုတိယတန်းမှာပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်အဲဒီအတိုင်းပဲ ခံယူထားတယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာက ကျွန်တော်တို့ ဒီလောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ 88 လယ်ဗယ်မှာ အများကြီးရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာ ကို အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီ လယ်ဗယ် တန်းတွေက အခုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ကိုမြအေးခင်းဗျားမပါနဲ့ ဆိုပြီး ဖယ်တဲ့သူမရှိပါဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုမြအေး ခင်းဗျား မပါနဲ့ ဆိုပြီး ဖယ်တဲ့သူမရှိ ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ စကားများရင်များမယ်။ ပရိုတိုကောအရ မင်းတို့ဖယ်ငါတို့ပဲ တက်မယ် ဆိုတာတော့ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ 88 မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလေ့။ကျွန်တော်ပြောတာ အဲဒီလူတွေကိုပါ လေးလေးစားစား အသိအမှတ် ပြုမှုနဲ့ သွားရမှာလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော့်ထက်တောင် စီနီယာကျတဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ဗကသ ကိုတင်အေး၊ နောက်တစ်ခါ မကသ ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအကြောင်း ဆိုပါလာတာပဲ။ ကိုဇော်မျိုးအောင်၊ ကျွန်တော်ရဲ့ စီနီယာတွေ။ကျွန်တော့် ထက် စီနီယာကျတယ်။ ပြည်ပမှာဆိုရင် ဇော်မင်း၊ မိုးသီးဇွန်၊ သက်ထွန်း၊ဇာနည်။ ကျွန်တော်တို့ တူတာတွေ လည်း ရှိမယ်။ ကွဲတာတွေ လည်း ရှိမယ်။အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်ပေါ်တဲ့နာမည်တွေကိုရွတ်ပြတာ။အများကြီး ရှိသေးတယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ သင်ခန်းစာ ယူလို့ မဆုံးတဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုပဲလေ။သင်ခန်းစာဆိုတာတော့ နောက်မျိုးဆက်တွေကတော့ ကြည့်ပြီးတော့ ယူရမှာပေါ့။ တစ်ခုတော့ …
နံပါတ် တစ်က ဒီနေ့တိုင်းပြည်အတွက် ဖြစ်စေချင်တာက စစ်အုပ်စု၊စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှင်သန်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ လုံးဝလက် မခံဘူး။ နံပါတ်နှစ်က ဒီမိုကရက်တစ်စံနဲ့တော့ ကိုက်ညီရမယ်။ အခုဒီမိုကရေစီပြောလိုက်၊ အခု နေရှင်နယ်လစ် လုပ်လိုက် အဲဒါတော့ မရဘူး။ Democratic Norms ရှိတယ်။ အခု ဒီမိုကရက်တစ် ပြောလိုက်။ဒိန်းဆို…ရခိုင်အရေးပေါ်လာတော့ ဒီမိုကရက် တစ် ကနေ နေရှင်နယ်လစ် အစွန်းတွေ ဘာတွေရောက်သွားရော။ အဲဒါ ဒီမိုကရက်တစ်မဟုတ်ဘူးလေ။ ထားပါတော့။ ဒီမိုကရက် တစ် ဖြစ်ရမယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရမယ်။ဒီသုံးချက်က ငွေရတုသုံးချက်မှာသွားတွေ့တယ်။ အကုန်ပါပြီးသား။ ဖွဲ့စည်းပုံ ကိစ္စ အကုန်ပါပြီးသား။ ချုပ်လိုက်ရင် တစ်ချက်ပဲ သွားတွေ့တယ်။ ဒီနေ့ကာလက ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ကာလ မဟုတ် တော့ ဘူးဗျ။ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်ရေးဆွဲရေး ဖြစ်သွားပြီ။ ငွေရတုကာလနဲ့ ကွာသွားတဲ့အချက်က။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခြေအနေတွေက ပြောင်းသွားတာ ကို။ချုပ်ရရင် National Reconciliation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီကွန်ဖရင့် ကလူအများကြီးနဲ့ လုပ်ရတာ။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ Pre Discussion၊ Pre Dialouge တွေ၊Brain Storming တွေအများကြီး လုပ်ရတာ။ ပြီးတော့မှ စားပွဲခုံ ပေါ်တင်ပြီးလုပ်ရတာ။ ဒါကဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အဲတိုင်းပဲလုပ်တာ။ အဲဒါတွေလုပ်နိုင်ဖို့ အခင်းအကျင်းကို အစွန်း တရား ကင်းကင်းနဲ့ လုပ်ရမှာ။ဘယ်ပါတီဘက်မှ မလိုက်နဲ့။ ဘယ်စစ်အုပ်စု ဘက်မှလည်းမလိုက်နဲ့။စစ်အုပ်စုကတော့ရှင်းတယ်။
တိုင်းပြည်ကြီး ဘာဖြစ်နေပြီ၊ ငါတို့ဘယ်လိုသွားသင့်ပြီ၊ဘယ်လိုပြောသင့်တယ်၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်တာထက် ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုတော့ဖြစ်သင့်ပြီ ဆိုတဲ့ …
ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့ မျက် နှာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ Independence ဖြစ်ပြီးတော့ ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကို လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ ဖြစ်အောင် ပြောတာ ဒါ 88 ရဲ့ Impression ပဲ။ အဲဒါက အဖွဲ့အစည်းတူခြင်း၊မတူခြင်းက အရေးမကြီးဘူးလေ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်း ကလည်း လုပ်လို့မရဘူး။ တချို့က စီးပွားရေး လုပ်နေတယ်။ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးကို တောက်လျောက်လေ့လာနေတာ။ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာ ထဲမှာ ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ်။လူဆိုတာ စားဝတ်နေရေးရှိသေးတယ်။ နိုင်ငံရေးထဲမှာ မရှိပေမယ့် သူရဲ့ စဉ်းစား တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကကျွန်တော့်ထက် မြင့်ချင်မြင့်မယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့က အချင်းချင်းတွေ သိတယ်လေ။ အဲဒါတွေစုပြီး ပြောရ မှာ။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည် ရဲ့ ကြားခံအဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့ အားအရမ်း ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒါကိုညွှန်းချင်တာ။ ကျနော်မြင်တာ အဲဒါကို လုပ်နိုင်တဲ့ဟာ 88 ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် 88 ကွန်ဖရင့်တစ်ခုကို ကျွန်တော် အရမ်းမျှော်လင့်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ ကိုအောင်ဆန်းတို့ ခေတ်ကနေ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးသမိုင်း ဖြတ်သန်းမှု တွေမှာ ကွဲထွက်သွားတာတွေ၊ ခွဲထွက်သွားတာတွေ အဲဒီကနေ နိုင်ငံရေးသင်ခန်းစာတွေ ကို အခု ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကနေ ၉၆ – ၉၈၊ ၂၀၀၇၊ စတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်အသီးသီးအနေနဲ့ ဒီသင်ခန်းစာတွေကို ရခဲ့ကြလား။
UMA – အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်မြင်တာ ရှေ့ ရှေ့မှာတော့ သင်ခန်းစာတွေကတော့ ယူခဲ့ကြတာပဲ။နိုင်ငံရေးဆိုတာ သင်ခန်းစာ ယူလို့ မဆုံးတဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုပဲလေ။သင်ခန်းစာဆိုတာတော့ နောက်မျိုးဆက်တွေကတော့ ကြည့်ပြီးတော့ ယူရမှာပေါ့။ တစ်ခုတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်တွေက ကျွန်တော်တို့ စီနီယာမျိုးဆက်တွေကို သဘောမတူရင်တောင် ဆဲတာ ဆိုတာ မလုပ်ဘူး။ အဲဒါတော့ 88 တွေ သိပ်ကောင်းတယ်။၆၂၊၇၄၊…၊ဘယ်တော့မှ မလုပ်ကြဘူး။ အပြန်အလှန် လေးစားမှု ပေးတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ သတိပြုစေချင်တာက နိုင်ငံရေး စကားပြောတဲ့ အခါ အသက်ကြီးခြင်း၊ငယ်ခြင်းက အရေး မကြီးဘူး။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးခြင်း၊ငယ်ခြင်းထက် အရေးကြီးတာက Respect ပေးခြင်းက ပိုအရေးကြီးတယ်။ Respect ဆိုတာ ကျိုးနွံ့ခြင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး၊ ခွဲခြားပြီးမြင်ဖို့လိုတယ်။ နောက်မျိုးဆက်တွေကို တိုက်တွန်းချင်တာ နိုင်ငံရေးကို ရဲရဲတင်းတင်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်နဲ့မတူတာကို မတူတဲ့ အတိုင်း ပြောခွင့်ရှိတယ်။ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မရိုင်းကြပါနဲ့၊မဆဲကြပါနဲ့။ အောက်လုံးတွေမသုံးကြပါနဲ့။ အထင်အမြင် လွဲစရာ ဖြစ်တဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ မသုံးကြပါနဲ့။ ဒါတွေကိုတော့ နောက်မျိုးဆက်က ယူရလိမ့်မယ်။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတာ။ ၂၀၂၀ အတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမိုကရက်တစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် …
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ Principle သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပြောတယ်။ Democratic Norms တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။အခုဒီမိုကရေစီပြောလိုက်၊ နေရှင်နယ်လစ်ပြောလိုက် အဲဒါတော့ မရဘူး။ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ နေရှင်နယ်လစ် က လူတိုင်းမှာရှိတယ်။ သူများတွေ လျောက်ပြောနေသလိုမျိုး ဘယ်သူမှ မလုပ်ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှလည်း မလုပ်ဘူး။ နေရှင်နယ်လစ်တောင်မှ ဘယ်လိုနေရှင်နယ်လစ်လဲ အရင်ဆုံး လေ့လာပါ။ လစ်ဘရယ် နေရှင်နယ်လစ်ဇင်လား။ဒါမျိုးတွေ ရှိသေးတယ် အရင်လေ့လာပါဦး။ ဖြစ်စေချင်တာက ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့က မျှမျှတတ ကိုဘာလို့ပြောသလဲဆိုတော့ ဆဲဗင်းဇူလိုင်မှာ ကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းတယ်။ဒါက စံလွဲသွားပြီလေ။ ငါနဲ့ခင်လို့သူလုပ်တာ မသိချင် ယောင်ဆောင်တယ် ဆိုတာ တာဝန်ကျေပါ့မလား။ ပြောသင့်တာပြောရမယ်။မုန်းလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ လွဲနေလို့ပြောတာ။ ချစ်လို့ ပြောတာလေ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုရှိတာက ပြောပုံပြောနည်းတော့ ရှိတာပေါ့။ ဆဲဆိုပြီးပြောမှတော့ဘယ်သူ လေးစားမလဲ။ လူ တစ်ယောက် ကို အပုပ်ချပြီးမှ နင်းတက်တဲ့ နိုင်ငံရေးက သမိုင်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ မိမိကိုယ်မိမိအရည်အချင်း ရှိအောင်လုပ်ပြီးမှ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုး လုပ်တဲ့ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးကသာလျင် သမိုင်းမှာကျန်ခဲ့မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရကို မကျေနပ်ဘူး ပြောမှာပဲ။ဘာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုပြောမှာပဲ။Principle အရပြောတာ။ အဲလို ပြောလို့ တစ်ဖက်ကနေငါတို့ကိုထိလို့ မခံဘူးပြောမယ်ဆို ပြောပါစေ။ ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံရေး ကိုယ်ပြောတာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတယ် ကိုယ်မရိုင်းနဲ့။ဘယ်သူမဆို တိုင်းပြည်ရဲ့အကူးအပြောင်းကိုသွားမယ်ဆို နိုင်ငံတစ်ခုကို ပဲ့ကိုင်တဲ့ အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ဒီအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီမှမရှီဘဲနဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုက ပရမ်းပတာ ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန် ပုံဖော်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီတွေ၊ဆိုရှယ်လစ်တွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ စံနှုန်းတရားတွေနဲ့ သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် စံနှုန်း တရားတွေ အပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးတော့ ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။ 88 Generation အပါအဝင်၊ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အပါအဝင် ဒီလို ကျင့်သုံးဖို့ လိုတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကို တစ်ယောက်ထောက်ပြ ဖေးမပေးတာကသာလျင် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဖြစ်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကိုမြအေး ဘာဖြည့်စွက်ပြောချင်လဲ။
UMA – 88 Generation ကို ကျွန်တော် အရမ်းယုံကြည်တယ်။ အရမ်း အားကိုးတယ်။ 88 Generation ဟာ အတောင် အလက် စုံတဲ့ မျိုးဆက်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ အားနည်းချက်ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ ရှိပါစေ။အဲဒါကြောင့် 88 တွေစုပြီးတော့မှာ ဖြစ်နိုင် ရင် ပြည်တွင်းပြည်ပ စုနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကြီး ဘာဖြစ်နေပြီ၊ ငါတို့ဘယ်လိုသွားသင့်ပြီ၊ ဘယ်လိုပြောသင့် တယ်၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်တာထက် ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုတော့ဖြစ်သင့်ပြီ ဆိုတဲ့ စုပြီး ပြောတဲ့အခြေအနေကို ကျွန်တော် အရမ်းတောင့်တတယ်။အရမ်းဖြစ်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒပဲ။ ဒါက ရှစ်ဆယ့်ရှစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတာ။ ၂၀၂၀အတွက်လည်း ကျွန်တော် တစ်ခါတည်းပြောမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမိုကရက်တစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တွေလည်း ပါတီထောင်ထားတယ်။ ၂၀၂၀ မှာမလွှဲမရှောင်သာ မဲဆွယ်တဲ့ကိစ္စတွေ ပါရမှာပဲ။ ကျွန်တော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ ပြောမယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်စံနဲ့ပဲ တိုင်းတာပြီး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အားလုံးကို ကျွန်တော်ထောက်ခံမှာ ဖြစ်တယ်။ NLD ပါတီ တစ်ခု တည်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူ့ပါတီ တစ်ခုတည်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကနေလိုက်ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော်ဘယ်ပါတီဝင်မှ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကပြည်မ အခြေအနေ။ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာတော့ ရှင်းပါတယ် Proxy မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုပဲ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ထောက်ခံ သွားမှာဖြစ်တယ်။
Tags: ကိုကိုကြီး, ကျောင်းသား, ဌေးကြွယ်, နိုင်ငံရေး, ပျောက်ဆုံးမျိုးဆက်, ပြည်သူ, မင်းကိုနိုင်, ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်
အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေ သေဆုံးဒဏ်ရာရတာကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ ငါတို့လက်ချက်ကြောင့်လို့ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး